China Spot mwenje PL021 fekitori uye vagadziri | Akazvarwa
Nezve Hofisi Yedu
Wiring isina mvura
Spot mwenje PL021
Marine giredhi 316 simbi isina tsvina diki yepamusoro yakasungirirwa yakazara neakasarudzika CREE LED package.Tempered girazi, fekitori Rated kune IP68 ichibvumira kunyudza mumvura nekudaro ichiramba zvakajairika Nyaya dzinokonzerwa nekushaikwa kwevhu drainage. 12/45 degree danda Sarudzo. sosi inovimbisa yakasimba Kudzivirirwa pamvura ingress .product inomhanya inotonhorera kusangana zvese Kubata tembiricha zvinodiwa.Ideal sedenga rakaiswa diki mucherechedzo mwenje. Mini pasi yakaiswa nzvimbo yekuvhenekera neimwe yakatungamirwa uye simba i1W. Chigadzirwa chinoshanduka, pane akasiyana tembiricha tembiricha yevatengi kusarudza. Izvo zvakakodzera kuisa mumapaki, mayadhi, mapindu, dzimba dzega, dzimba, dzimba dzemukati nekunze. Inogona kushandiswa sechishandiso chemwenje isina mvura, mwenje yemapopoma, isina simbi spike mwenje.
Kutakura uye kupakata
Chiedza che LED Yakakwirira Simba LED
Chiedza Chiedza RGB, CW.WW, NW, Tsvuku, Girini, Bhuruu, Amber
Optics S12 ° / F45 °
Magetsi N / A.
IP Kuyera IP68
Mvumo CE RoS, IP
Ambient tembiricha -2O ° C ~ + 45 ° C
Avhareji yehupenyu 50,000Hrs
Zvishongedzo (Inesarudzo) N / A.
Zvishandiso Mukati / Kunze / Landscape / Submersible
PL021 SPOT CHIEDZA
MUENZANISO HAPANA. Akatungamirira Brand Ruvara DANDA PowerMode Input Wiring Cable Simba Luminous nekubudisa Chimiro DrillSize
PL021 CREE CW, WW, NW, Tsvuku, Girini, Bhuruu, Amber 12/45 Nguva dzose yazvino 350mA Series 3M 2X0.75mm² Cable 1W 100LM 60X60X78 N / A.
PL021D CREE CW, WW, NW, Red Green, Bhuruu, Amber 12/45 Constant voltage 24VDC Kufanana 3M 2X0.75mm² Cable 1.3W 100LM 60X60X78 N / A.
PL021RGB Edison RGB 45 Nguva dzose yazvino 350mA Series 2x3M 4X0.5mm² Cable 3W N / A. 60X60X78 N / A.
PL021DMX-RGB Edison RGB 45 Constant voltage 24VDC DMX Mutungamiriri Kufanana 1.1M 4X0.5mm² Cable 3.5W N / A. 60X60X78 N / A.
* IES Dhata rutsigiro.
■ Mepu yeprojekti
Pashure: Spot mwenje PL023
Zvadaro: Mukati-Ground GL166
Zvese zvigadzirwa zvinozoiswa mumapaketi uye kutumirwa chete mushure mekuti zvese zvigadzirwa zvapasa akasiyana index index bvunzo, uye kurongedza ndicho zvakare chakakosha chikamu chisingakwanise kufuratirwa. Sezvo marambi esimbi isina waya ari kurema, isu takasarudza makatoni akakora uye akaomarara kune ruzivo rwepakeji kuti tione kuti chigadzirwa chinokwanisa kudzivirirwa zvakanaka kubva pakubata kana kuputika panguva yekufambisa. Chigadzirwa chega chega cheOubo chinoenderana nebhokisi remukati rakasarudzika uye rinosarudza inoenderana mhando yekupakata zvinoenderana nehunhu, nyika uye huremu hwezvinhu zvinotakurwa kuona kuti chigadzirwa chimwe nechimwe chakarongedzwa pasina kusiya mukaha pakati pebhokisi nechigadzirwa zvakagadziriswa Mune bhokisi. Yedu yakarongedzwa kurongedza ndeye brown brown yakakomberedzwa yemukati bhokisi uye bhuruu yakakomberedzwa yekunze bhokisi. Kana mutengi achida kugadzira yakatarwa bhokisi bhokisi yechigadzirwa, isu tinogona zvakare kuzviita, chero bedzi iwe uchizivisa kutengesa kwedu pamberi, tichaita zvinoenderana zvinoenderana mukutanga nhanho.
Sehunyanzvi hwekugadzira marambi ekunze esimbi isina simbi, Eurborn ine yayo yakazara seti yekuyedza marabhoritari. Isu hatitombotenderi kune vekunze vekunze mapato nekuti isu tatova neakateedzana epamberi uye akazara ehunyanzvi michina, uye zvese zvishandiso zvinowanzo kuongororwa uye kuchengetedzwa. Ita shuwa kuti zvese zvishandiso zvinokwanisa kushanda zvakajairika uye kugadzirisa nenguva uye kudzora bvunzo dzinoenderana nezvechigadzirwa munguva yekutanga.
Musangano weEurborn une michina yakawanda yehunyanzvi uye zvishandiso zvekuyedza senge maovheni anopisa mweya, muchina wekudzora, UV ultraviolet makamuri ekuyedza, michina yekumaka laser, tembiricha yenguva dzose uye makamuri ekuyedza, munyu wemuchina wekuyedza michina, nekukurumidza masystem eUS. test system (IES bvunzo), UV ichirapa ovhoni uye zvemagetsi zvinogara zvichipisa tembiricha kuomesa ovhoni, nezvimwe. Tinogona kuwana yakazara yehunhu kudzora system yezvose zvigadzirwa zvatinogadzira.
Chigadzirwa chega chega chinozoedzwa 100% yemagetsi paramende bvunzo, 100% kukwegura bvunzo uye 100% isina mvura bvunzo. Zvinoenderana nemakore mazhinji echiitiko chechigadzirwa, nharaunda yakatarisana nechigadzirwa iyi inowedzera zvakapetwa zvakanyanya kupfuura mwenje yemukati yekunze- pasi uye pasi pemvura marambi esimbi isina tsvina. Isu tinonyatsoziva kuti mwenje haingaone chero matambudziko munguva pfupi munzvimbo dzakajairika. Kune zvigadzirwa zveEurborn, isu tinonyanya kufunga nezvekuona kuti mwenje unokwanisa kuzadzikiswa kwenguva refu kushanda kushanda munzvimbo dzakasiyana dzakashata. Munzvimbo yakajairwa, bvunzo yedu yemamiriro akaenzanisirwa yakawandisa nguva. Iyi nharaunda ine hukasha inogona kuratidza mhando yemwenje yeLED kuona kuti hapana zvigadzirwa zvakaremara. Chete mushure mekuongororwa kuburikidza nematanho ndipo Ober ichatumira zvigadzirwa zvakanakisa kwatiri Ruoko rwevatengi.
Eurborn ine zvitupa zvinokwanisa seIP, CE, ROHS, chitarisiko patent uye ISO, nezvimwe.
Chitupa cheIP: Iyo International Lamp Dziviriro Sangano (IP) inoronga marambi zvinoenderana ne IP yavo yekukodha system yeisina guruva, yakasimba nyaya yekunze uye isina mvura yekupinda. Semuenzaniso, maEurborn anonyanya kugadzira zvigadzirwa zvekunze zvakaita sekuvigwa & mukati-pasi mwenje, pasi pemvura mwenje. Magetsi ese ekunze esimbi anosangana neIP68, uye iwo anogona kushandiswa mukushandisa kwakakomberedzwa kana pasi pemvura. Chitupa cheEU CE: Zvigadzirwa hazvizotyisidzira izvo zvekuchengetedza zvinodiwa nevanhu, mhuka uye chengetedzo yechigadzirwa. Chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvedu zvine CE chitupa. Chitupa cheROHS: Icho chinosungirwa chiyero chakamisikidzwa nemutemo weEU. Zita rayo rizere izita rekuti "Rairo rekutadzisa mashandisirwo eZvimwe Zvinokuvadza MuMagetsi neMagetsi Midziyo" Iyo inowanzo shandiswa kusiyanisa zvinhu uye maitiro maitiro emagetsi nemagetsi zvigadzirwa. Inonyanya kubatsira kune hutano hwevanhu uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Chinangwa cheiyero iyi kubvisa lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls uye polybrominated diphenyl ether mune zvemagetsi nemagetsi zvigadzirwa. Kuti tidzivirire zviri nani kodzero uye zvido zvezvigadzirwa zvedu, isu tine yedu chitarisiko patent chitupa chezvinhu zvakajairika zvigadzirwa. Chitupa che ISO: ISO 9000 yakateedzana ndiyo yakanyanya kuzivikanwa mwero pakati pemitemo yakawanda yepasirese yakasimbiswa neIO (International Organisation for Standardization). Ichi chiyero hachisi chekuongorora mhando yechigadzirwa, asi kuongorora kudzora kwehunhu hwechigadzirwa mukugadzirwa kwekugadzira. Iyo yehurongwa manejimendi manejimendi.
1.Muviri wemwenje wechigadzirwa unogadzirwa neSNS316L simbi isina simbi. 316 simbi isina chinhu ine Mo, iri nani mukumisa ngura pane 304 simbi isina tsvina munzvimbo dzakakwirira dzekupisa. 316 kazhinji inoderedza zvirimo zveCr uye inowedzera zvirimo zveNi uye inowedzera Mo2% ~ 3%. Naizvozvo, kugona kwayo kurwisa ngura kwakasimba kudarika 304, inokodzera kushandiswa mumakemikari, mvura yegungwa uye dzimwe nharaunda.
2.Iyo mwenje mwenje sosi inotora iyo CREE brand. CREE inotungamira yekuvhenekesa mutsva uye semiconductor mugadziri pamusika. Kubatsira kwechip kunouya kubva kusilicon carbide (SiC) zvinhu, izvo zvinogona kushandisa simba rakawanda munzvimbo diki, tichienzanisa Mamwe matekinoroji aripo, zvishandiso uye zvigadzirwa zvinogadzira kupisa kushoma. CREE LED inosanganisa yakanyanyisa simba-inobudirira flip-chip InGaN zvinhu uye yekambani yekambani G · SIC® substrate kuita imwe, kuitira kuti kukwirira-kwakasimba uye kwakanyanya-kushanda maLED kuzadzikise kuita kwakanyanya kudhura.
3.Igirazi rinotora girazi rakapfava + chikamu chesilika skrini, uye girazi girazi iri 3-12mm.
4.Iyo kambani yakagara ichisarudza yakakwira-conduction aluminium substrates ine yekupisa conductivity pamusoro pe2.0WM / K. Aluminium substrates anoshandiswa seakananga kupisa kupisa zvinhu zve LEDs, izvo zvakabatana zvakanyanya nehupenyu hwekushanda kwemaLED. Iyo yakakwira thermal conductivity aluminium substrate ine yakanaka conduction uye kupisa kupisa kudzora kugona, uye inokodzera zvakanyanya zvigadzirwa izvo zvinoda kwakanyanya kupisa kupisa kudzora kugona, kunyanya yakakwira-simba maUS.
Kunze Kwechiedza Chiedza
Pin Spot Kuvhenekera
Chinyoro chakakosha: Tichaisa pamberi meseji inosanganisira "Kambani zita". Ndokumbirawo muve nechokwadi chekusiya ruzivo urwu "nemubvunzo wako". Ndatenda!
Wall wall ML104
Gl118rgb-ls Ground Chiedza
Wall wall ML1021
Sales hofisi: Kamuri 702, Zhe Jiang Commercial Kuvaka, No. 430 Dongguan Avenue, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China
Runhare: +86 769 2302 2798;
Runhare: +86 769 8523 2755;
Email kwatiri: info@eurborn.com